Debian 9.0 Tambanudza iyo nyowani nyowani mukuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
Debian 9.0 (codenamed Stretch) inotanga nhanho yayo yekuvandudza. Debian ndeimwe yezvakakosha zvikuru kugoverwa kweGNU / Linux uye ine nharaunda yakakura yekusimudzira kumashure kwayo uye nebasa rakawanda. Iyo ndiyo hwaro hwekugovera hwakakosha seUbuntu, Linux Mint, Kali Linux uye zvimwe zvakawanda. Kukura kwayo kunogara kuripo, kunyangwe kuburitswa kwayo kuri kunonoka.
Mushure mekuburitswa kwakabudirira kweshanduro Debian 8.0Ino ndiyo nguva yekutarisa padanho rinotevera rinovandudza iyo yazvino Jessie. Sezvauri kuona, kwenguva yakareba mazita emakodhi eDebian vhezheni ane mazita evatambi kubva kune ane hupenyu firimu Toy Nhau kubva kuDisney Pstrong (Buzz, Rex, Bo, Hamm, Slink, Potato, Woody, Sarge, Etch, Lenny, Squeeze, Wheezy naJessie).
Kutambanudza richava iro zita idzva reiyo Debian 9.0 vhezheni uye sezvatakatotaura kare mune ino blog, Debian 10 zvakare ine zita ratove, Buster. Asi ichi chichiri makore akati wandei wabvapo, zvino yave nguva yekunakidzwa nebasa rinonakidza reDebian 8.0 uye ndinotarisira kuti Debian 9.0 inongo shamisa.
Nenzira Kutambanudza izita re octopus achionekwa sehunhu mune imwe yeToy Story mafirimu. Iyo tiraira yerabha muchimiro che octopus uye ruvara rwepepuru runoonekwa munzvimbo yevanochengeta yemuvhi Toy Nhau 3.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Debian 9.0 Stretch inotanga nhanho yayo yekuvandudza
Zvichava zvinonakidza sezvo ese ari maviri gnome shell angave akura zvakanyanya uye kde 5 zvakare, kunyangwe sinamoni futi